I-Color Change Garnet, evela eTanzania / akukho ukwelashwa / ividiyo
Amathegi I-Garnet Yokuguqula Umbala
Uxube lwe-spessartite ne-pyrope garnet. Le garnet inikeza ushintsho lombala kusuka ku-brownish emini kuya ku-rose pink ekukhanyeni kwe-incandescent. Ukushintsha kombala kukhulu kakhulu futhi kuyamangalisa, okudlula lokho kwe-alexandrite ebiza kakhulu.
Ilungu elingajwayelekile futhi eliyigugu leqembu le-garnet lama-gemstone. Ifuna kakhulu ikhono layo elihlukile ukushintsha umbala kuye ngokuthi hlobo luni lomthombo okubhekwa kuwo. Ikhono lokushintsha umbala livame ukungalungi ngokuphambene nesikhalazo, okuyikhono lokuveza imibala ehlukene kuye ngokuthi i-angle yokubuka, kuyilapho izenzakalo zokushintsha kombala azixhomeki ku-angle yokubuka. Umbala wokuguqula i-garnet ngokuvamile i-hybrid-mix of spessartite ne-pyrope garnet futhi ezimweni eziningi, ingase ibe nezinhlamvu ze-grossularite noma i-almandine garnet.
Ubukhulu bokushintsha kombala kungaba okumangalisayo, ngokuvamile okudlula lokho kwe-alexandrite engcono kakhulu. Iningi lalabo garnets lizoveza umbala obomvu noma obomvu uma ubhekwa ngaphansi kokukhanya kwemvelo, kodwa uma ubhekwa ngaphansi kokukhanya kwe-incandescent, kuzovela kubomvu kumbala. Kunezinhlobonhlobo zezinye izinhlanganisela zokushintsha umbala ezenzekayo. Ukuze uhloniphe ngempela uhla oluphelele lwegarnet yomsindo, ama-specimens kufanele agcinwe ngaphansi kwezimo ezihlukahlukene zokukhanyisa, kufaka phakathi ukukhanya kwekusasa ekuseni, ukukhanya kwemini kusihlwa, ukukhanya kwe-fluorescent nokukhanya kwe-incandescent noma ukukhanyisa amakhandlela.
Njengama-garnet amaningi we-garnet, i-garnet yokushintsha umbala ayaziwa ukuthi iyaphathwa noma iqiniswe nganoma iyiphi indlela.
Thenga umbala weMbala Shintsha i-Garnet esitolo sethu